ချောကလက်ကျူးပစ်လေး: Valentine's Day ရဲ့ သင်္ကေတများ
စာရေးသူ ချောကလက်ကျူးပစ်လေး ပို့စ်ရေးချိန် 8:13 PM
Valentine's Day ရဲ့ သင်္ကေတတွေဖတ်သွားတယ်ကွယ်
ပျောက်လှချည်လား..ညီလေးရာ.။ သိပ်အကြာကြီးမပျောက်နဲ့ကွ. ညီလေးမရှိရင်. အစ်ကိုအငယ်ဆုံး
မို့လို့..း)။Valentine လက်ဆောင်လေးတွေ ဖတ်ပြီး ပြုံးသွားတယ်. ။ (ပို့လိုက်တဲ့ထဲမှာ တစ်ခုမှ မပါလို့..း)။
သူကလဲချောကလက်မကြိုက်ကိုယ်ကလဲမကြိုက် ဘိန်းမုန့်ပေးရင်ရောမရဘူးလားဟင်း)))
ပျောက်တယ်ဟနင်လည်း ဘယ်တွေရောက် လေ့လာသွားတယ်ဟေး ဘာပေးရမယ်ဆိုတာ
မြှားနတ်မောင်တို့က Vday ကယ်လို့ ပြန်ပေါ်လာတာ.. ဟွန်း ပြောချင်ဘူး
အမလာသွားတယ်နော်... ချစ်သူများနေ့အမီ ကူညီအုန်းလေ.....